एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठाका लागि संसद् झुक्नुपर्ने ? यो लोकतन्त्र होइन : कांग्रेस सांसद रिजाल
फरकधार / बैशाख २४, २०७६
काठमाडौं– सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको गरिमा कायम गर्न नसकेको कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले आरोप लगाएका छन् । मंगलबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा रिजालले सभामुखको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘यसरी संसद चल्दैन, सभामुख महोदय, तपाईंले संसदको गरिमा कायम गर्न सक्नुभएन,’ कांग्रेस सांसदको नाराबाजीका बीच सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न समय दिएपछि रिजालले भने, ‘हामीले संशोधन दर्ता गरायौँ । सभामुख महोदयसँग संसदको मर्यादालाई कायम गर्नुहुन्थ्यो भनेर आशा थियो । सभामुखले त्यो काम सक्नुभएन ।’ संसदीय अभ्यासमा यो भन्दा नराम्रो काम हुन नसक्ने रिजालको दाबी थियो ।
संसदको गरिमालाई तल पारिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसदको अभ्यासलाई कमजोर नबनाउनुस्, एउटा व्यक्तिको प्रतिष्ठाका लागि संसद झुक्नुपर्ने, नागरिक झुक्नुपर्ने ? यो लोकतन्त्र होइन, यो संविधान होइन, त्यही आशंका भएर संशोधन राखेको हो ।’
सभामुख महराले नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कांग्रेस सांसद रिजाललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने जवाफका लागि समय दिएका थिए ।
रिजालले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुख महराले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । संशेधन प्रस्ताव संसदको बहुमतले अस्वीकृत गर्यो ।